IZIPHO EZICLEVER EZINGAMA-32 ZOMKHWENYANA WAKHO - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane Ezona Zipho ziBalaseleyo kuye nawuphi na umkhwenyana (kwaye Nawuphi na umcimbi)
Ezona Zipho ziBalaseleyo kuye nawuphi na umkhwenyana (kwaye Nawuphi na umcimbi)
Sifumene into kuyo yonke i-SIL-nditsho leyo kunzima ukuyithenga. Ukuhlaziywa kwe-Oct 30, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Yintoni eyenza isipho esihle kumkhwenyana wakho? Sinezimvo ezingaphezulu kwezimbalwa. Mhlawumbi uyi-SIL yexesha elizayo kwaye usamazi. Okanye mhlawumbi, ebekho ebomini bakho okwethutyana kwaye uphelelwe yimpembelelo. Siyazi ukuba ukukhetha izipho kunokukhohlisa ngokukhawuleza, kwaye loo nto iya kabini ukuba ingunyana wakho ekuphela kwakhe (bathanda ntoni oonyana, phofu?) Okanye ubonakala ngathi unayo yonke into (ahem, uluhlu lweminqweno yomtshato oluzalisekiswe ngokupheleleyo). Kungenxa yoko le nto sabelana ngolu luhlu lwezipho ezicinga umkhwenyana wakho. Apha ngezantsi, uyakufumana izipho ngazo zonke iintlobo zobuntu, ukusuka kwiindidi zangaphandle ukuya kubalandeli bezemidlalo abafayo. Kukho izipho zokuzalwa komkhwenyana wakho, iiholide okanye usuku lomtshato oluza kubakho.
1. Amava eKofu yeHlabathi
Nokuba uzingela izipho zeKrisimesi kumkhwenyana wakho okanye into emnandi ngoMhla kaTata, awungekhe uhambe gwenxa ngekofu ethile emnandi. Thatha inotshi ngokumnika isipho umrhumo . I-SIL yakho iyakufumana ukungcamla okuxubileyo kwihlabathi liphela, kwaye uyakuyiqonda ngokupheleleyo imeko ebonakalayo yesi sipho sodwa.
Iklabhu yekofu yeAtlas Ukubhaliswa kwenyanga, ukusuka kwi- $ 60 yobhaliso lwesipho, AtlasCoffeeClub.com
2. Isithethi esiBalaseleyo seBluetooth
Ukuba uyathanda ukudlala umculo, uyasithanda esi sithethi sinezinto ezininzi. Isixhobo esomeleleyo, esinemozulu esisebenza ngaphakathi okanye ngaphandle, kwaye ikwaqhayisa ngobuchule bokuncedisa. (Oko kuthetha ukuba inokumxelela imozulu, isete ixesha kunye nokunye.) Inikwe amandla ibhetri kwaye inesiphatho esihle, esakhelwe-ngaphakathi, esifanelekileyo kumfo othanda ukuzonwabisa ekuhambeni.
UNonos Hambisa isithethi esilumkileyo, $ 399, Sonos.com
3. Ibhotile evulekileyo ephindaphindwe njengeMemorabilia yeMidlalo
Esi sivuli sibhotile sisebenza ngesiphatho esahlukileyo: Senziwe ngentonga ye-NHL hockey! Uya kukhanya kwangoko xa eqonda, kwaye naninina xa eqala ukubonisa. Khetha ngokulula iqela lakhe alithandayo kwaye une-bespoke, isipho esingqinisisiweyo.
Iwadi yakwaWallau Umdlalo we-NHL usebenzise i-hockey stick bottle opener, ukusuka kwi- $ 125, UncommonGoods.com
4. Ijezi eNtofontofo
Ukukhangela isipho esihle seKrisimesi kumkhwenyana wakho? Yeka ukukhangela apha. Le sweta iya kumgcina eshushu entwasahlobo nangaphaya. Ngcono nangakumbi, yenziwe ngokuzinzileyo nge-100% yoboya be-merino. Kwaye, enkosi kulwakhiwo lwayo oluhle, le mpahla yokunxiba e-super-comfy ayizukuphulukana nemilo yayo. Linda nje ubone, iya kuba kukuya kwakhe kwiiholide ezininzi ezizayo.
Zonke iintaka I-jumper yamadoda, i-135 yeedola, Zonke iintaka.com
5. Umatshini weKofi oLungeleleneyo
Nokuba ulibele ukubhalisela enye okanye usemarikeni ukuze aphucule, umatshini we-espresso sisipho esikhulu kumkhwenyana onwabela indebe yemihla ngemihla. Olu khetho lwe-ultra-slim luyilelwe ukuba lulingane ngokufanelekileyo ekhitshini lakhe. Yenziwe nakwizinto ezingama-54% zerisayikilishi, ukuhambisa umatshini omabini enesitayile kunye nozinzo.
I-Nespresso I-Vertuo elandelayo, ukusuka kwi- $ 159, KwiNespresso.com
6. Isipaji esincinci
Nasi isipho kumkhwenyana oxabisa ukusebenza ngokukuko. Le wallet yesikhumba yeprimiyamu ilingana nazo zonke izinto eziyimfuneko ngelixa ugcina iphrofayili esezantsi. Incinci ngokwaneleyo ukuba ingene epokothweni yakhe, yomelele ngokwaneleyo ukuba isetyenziswe yonke imihla kwaye intle ngokwaneleyo ukuba iqabane layo liyivume. Kwaye, inenqaku elincinci elinobuqili eliya kuthi ngokukhawuleza likhuphe amakhadi akhe ukuze afikeleleke ngokulula.
Ngaphandle Isipaji sePalamente, $ 89, Ekster.com
7. (ngokufihlakeleyo) kwiWatch Smart
Ukuba unesitayile esingaphantsi kodwa uthanda ukuhlala esebenza, le wotshi incinci sisipho esikhulu kuye. Emva kobuso be-analogue elula, inokulandela umkhondo womsebenzi we-SIL, indlela, ukulala kunye nokunye. Ngaphezulu kwayo yonke into, ibhetri ihlala ukuya kuthi ga kwiinyanga ezili-18, ke ngekhe kufuneke ukuba ijikeleze itshaja engxamisekileyo. Yongeza le kuluhlu lwezinto ezipholileyo ukufumana umkhwenyana wakho ngeKrisimesi, usuku lokuzalwa kwakhe okanye nantoni na eyenye.
Izipho zeminyaka engama-20 zomyeni
Ngamaxesha Hambisa umsebenzi kunye nokulala ubukele, $ 70, Ngeengcango.com
8. Iseti yesiGqibo seNkcubeko
Menze azive ekhethekileyo ngesi sipho sicingelwa abakhwenyana: i-decanter eyenzelwe wena eneiglasi ezifanayo. Khetha kwizinto ezimbalwa ezikhethiweyo zelebheli, zonke onokuzenza ngokwezifiso usebenzisa igama lakhe okanye ii-initials. Ukuya kwemayile engaphezulu, bhangqa nayo Ibhotile yewiski ninokuphunga kwinkampani yomnye nomnye ixesha lomkhwenyana osemgangathweni. Iyakwenza enkulu isipho somtshato kumkhwenyana ofuna ukumamkela kusapho.
Imitshato yaseFlowertown I-decanter ebhalwe igama lomntu ineiglasi, ukusuka kwi- $ 35, Etsy.com
9. Ukukhethwa kweesosi ezishushu zeGourmet
Le ye-SIL eqhola konke ukutya-kubandakanya ezintathu zeTruffle ezimnandi ezifakwe kwisosi eshushu eshushu ukuze azame. Amanqaku ebhonasi kwinkcazo ye-luxe!
truff Iipakethe ezahlukeneyo, $ 70, Truff.com
10. Ubhaka oziintlobo ngeentlobo
Ezinye zezona zipho zibalaseleyo zabakhwenyana zezona zibonakalayo. Le bhegi inesitayile yenzelwe ukubamba zonke izinto eziyimfuneko, nokuba uya emsebenzini okanye uphume uhambo. Kukho amacandelo ahlukeneyo kwilaptop yakhe, izinto ezinje ngefowuni yakhe okanye iiglasi zelanga, kunye neluphu efanelekileyo yokufaka amaqhosha akhe kuye. Ukuba ayonelanga, ikwayilelwe ukuba izive yomelele kwaye ikhululekile imini yonke. Ubhaka obulungileyo yinto angaze ayicinge ukuba angaziculela yona, kodwa iya kuza iklutch rhoqo.
UBellroy I-Classic Backpack Plus, i- $ 115, Bellroy.com
11.Amazinyo abaza kumenza azive emhle
Sisiphi isipho esilungileyo sokuthenga-nzima kumkhwenyana? Into emangazayo. Ezi ayizizo nje naziphi na i-toothpick- zifakwe kwiscotch esihle. Ukukhupha incasa, ekuphela kwento ekufuneka eyenzile kukuluma ngobunono. Ababuyekezi abonwabileyo bayibiza ngokuba 'sisipho esingaqhelekanga kodwa esimnandi,' 'isitokhwe esifanelekileyo' kunye nokusilela okungagungqiyo 'xa ungazi ukuba ungayifunela ntoni indoda.' Hee, ukuba uhlala ene-toothpick emlonyeni wakhe, inokuba iyinto entle.
Iimpahla ezingaqhelekanga Isipho esenziwe ngesipho sokufakwa kwamazinyo, $ 36, UncommonGoods.com
12. Isibini seKhonkco elenziwe ngaBucala
Ezi ziqhobosho zesikhumba sekhofi zenza izipho ezinentsingiselo kumkhwenyana wakho wexesha elizayo ngosuku lomtshato-ngakumbi ukuba ukhetha ukuzinxiba ezantsi. Ngamnye uza kufakwa isitampu ngonobumba omnye. Yijike ibe sisimbo esithandekayo ngakumbi kwaye ufumane esinye kunye nesiqalo sokuqala kunye nesinye neqabane lakhe. Iya kumbonisa indlela onwabe ngayo ngomanyano lwabo.
U-Kingsley Isikhumba ii-cufflinks ezizezakho zomyeni, $ 68, Etsy.com
13. Igadi yeHerb yangaphakathi
Ukuba uthanda ukupheka ngezithako ezintsha, qwa lasela le ngadi yemifuno. Isipho sokuyila simvumela ukuba akhule nantoni na-ukusuka kwi-cilantro ukuya kwi-chili pepper-nokuba imeko yakhe injani. Isixhobo esihambelanayo siyazenzekela kukhathalelo lwezityalo, okuthetha ukuba akufuneki aphakamise umnwe. Kuyakumnceda ukugcina imali kwivenkile yokutya, kunye nokuba kumnandi ukubukela ngokusebenza. Ngapha koko, sazivavanye thina ngokwethu saza sazenza iiMbasa zeKnot Registry!
Cofa kwaye ukhule Igadi eyiSmart 3, $ 100, Cofa kwiGrand.com
14. Ibhatyi emelana neMozulu
Ukuba uthenga uhlobo lwangaphandle, jonga ibhatyi eguquguqukayo enamalungu alinganayo asebenzayo kunye nefashoni. Ingaphandle elingangenwa ngamanzi liya kumnceda ukuba ome, ngelixa uboya begusha obucekeceke buvalela ubushushu. Ibhatyi le ilungile sisipho esamkelekileyo unyaka wonke, ukusuka kumhla wokuzalwa kwakhe ukuya kuSuku lukaTata.
Ubuso boMntla I-Apex Risor ibhatyi yokugxotha amanzi, isuka kwi- $ 149, Imvu.com
15. Ikhalenda yeDesika yesiqhelo
Ukuthenga i-SIL evuthayo? Izipho zeefoto yindlela eya phambili. Fumana le khalenda yedesika eyenzelwe wena iprintwe ngemifanekiso ekhethekileyo yakhe kunye nosapho. Siyincoma njengeHanukkah okanye isipho seKrisimesi kumkhwenyana wakho. Ngale ndlela, unokuyisebenzisa ngokukhawuleza xa unyaka omtsha ufika.
Ukuvuswa kweArtifact I-easel kunye nekhalenda, yobhedu, ukusuka kwi- $ 49, ArtifactUprising.com
16. Iseti yokuKhathalela iSipho seCaramel
Yonelisa izinyo lakhe elimnandi ngesi seti sinikezelweyo se-caramel. Hlanganisa kwaye utshatise iincasa azokuzithanda-unokhetho lwakho kwi-Original ityuwa, Ispresso esityunyuzwe ngesandla, i-Irish Cream, iButtercotch etshayiweyo kunye neCrocolate Peppermint Crunch. Kodwa eyona nto icwangcisa ezi candies ezithile yindlela ezipakishwe ngayo. Ibhokisi yesipho esineeholide ifundeka ngolu hlobo, 'imicimbi yosapho,' eyona nto imnandi ngokwabelana nomkhwe. Kungoko kutheni le yenye yezona zipho sizithandayo zeKrisimesi zabakhwenyana.
I-Shotwell Candy Co. Iseti yesipho seholide ye caramel, $ 40, NgxiCandy.com
17. Iperi yobugcisa yeeSlippers
Mkhuthaze ukuba ashiye izihlangu zakhe emnyango kunye nezi ziliphu zi-oh-so-comfy, ezenziwe ngothando ezenziwe ngoboya obufanelekileyo kunye nolusu. Banobunewunewu obaneleyo bokuzonwabisa malunga nendlu ngelixa bajongeke ngokugqibeleleyo. (Usenokuhamba nabo eofisini!)
IiKyrgies Zonke izinto zendalo zeTengries zaziva zityibilika, $ 79, Etsy.com
18. Isikhanyisi esine-Monogrammed
Ukuba nesiphatho sokulayita akusokuze kubuhlungu, kwaye oku kujongeka kumangalisa. Yenziwe ngegolide kwaye ikrolwa ngoonobumba bayo bokuqala. Siyayithanda njengesipho esincinci kodwa esicingisisiweyo kumkhwenyana wakho ngosuku lomtshato.
Ivenkile yeKnot Isiko elixutywe ngegolide ngokukhanya okungahambisani nomoya kwiMonogram yeMveli, $ 15,
Nksk. Nditsho nks. vs ukuphoswa
19. Iiglasi ezihlonipha imbeko ethandwayo
Ukuthenga iimbaleki? Mbonise ukuba ubumamele-kwaye uyaziqhenya ngaye-ngale grafti ikhethekileyo. Iza kunye nemephu yendlela yakhe yamanqanaba yakutshanje! I-FYI: Iimpahla ezingaqhelekanga ithengisa iitoni zezinye izinto ezihonjiswe ngazo zonke iintlobo zemephu ezahlukeneyo ezinentsingiselo.
UBrian, uDave, uNeil noColin Iglasi yepeyinti yeparathon, $ 18, UncommonGoods.com
20. Ubugcisa beNkundla ePholileyo
I-Grommet uphethe nezipho zemephu ezimbalwa ezinomdla. Lo mthengisi wenza iimephu ezintle ze-laser-cut zamabala emidlalo kwilizwe liphela-amaqela esizwe naekholeji afakiwe. Ukuba unomqolomba wendoda, esi sipho sokuzalwa somkhwenyana wakho siza kwenza udibaniso olugqibeleleyo.
Imephu yeMidlalo yeBhola Imephu yelizwe esikwe kwimephu yelaser, ukusuka kwi- $ 125, TheGrommet.com
21. I-Mug yePunny Pop yeNkcubeko
Ukuba uhlala eqhekeza ngobulumko, izipho ezihlekisayo kumkhwenyana wakho ngumdlalo olungileyo. Le imagi yekhofi emnandi luphawu oluncinci olulungele nawuphi na umbhiyozo. Kwaye ukuba iqabane lomntwana wakho lithe phithi zizinto zamva nje Idabi leenkwenkwezi Ukujikeleza, baya kuyithanda nangakumbi.
Ubutyebi beveki Unyana oGqwesileyo ka-Yoda eMug, ukusuka kwi- $ 14, Etsy.com
22. I-Stylish, Personalized Keychain
Njengoko sihlala sisitsho xa kufikwa ekunikezelweni kwesipho: Xa ungathandabuzeki, hamba nento eluncedo esele ikhethekile ngandlela thile. Le khonkco yesitshixo enokwenziwa ngokwezifiso iyalingana netyala, kwaye lomelele kwaye linomtsalane ukuqala. Inokukrolwa nekowuti, igama lakhe okanye umhla onentsingiselo. Uthini ngala mhla waba ngumkhwenyana wakho ngokusesikweni? Oko kunokuba kumenze aqhekeze.
+ - + - I-keychain eyenziwe ngumntu, ukusuka kwi- $ 17, Etsy.com
23. Ibhokisi yokubhalisa yaseBespoke
Iposi yeBespoke ngeFacebook
Ukuphela komhla wokuzalwa okanye izimvo zesipho seKrisimesi kumkhwenyana wakho? Mbonise ukuba umazi kakuhle ngebhokisi yokubhalisela eyenzelwe ukuthanda kwakhe. Khetha iindidi anomdla kuzo, ukusuka kwi-bar- kunye ne-cookware ukuya ekuzilungiseni kunye nakwizinto zokukhempisha. Rhoqo ngenyanga, uya kufumana ibhokisi yezinto ezimnandi ezibonisa izinto azithandayo.
Iposi yeBespoke ubulungu bokubhalisa, $ 45 kwibhokisi nganye, BespokePost.com
ukwenza izitena zomlilo omhlophe
24. Iseti yentloko yokudlala (eneneni iyonwabisa)
Ukuba umbono wakhe wokuphola udlala ingxelo yokugqibela ye Umxeba womsebenzi , zama izipho zobugcisa kumkhwenyana wakho eziya kuphucula amava akhe okudlala. Esi sihloko sentloko sinamawaka okubuyekezwa kwe-rave enkosi kumgangatho wayo ogqwesileyo kunye noyilo lwe-ergonomic. Ngapha koko, isebenza nazo zonke iintlobo zokuthuthuzelwa, nokuba i-SIL yakho ikhetha iPC yakhe okanye iPlayStation.
IHyperX I-Cloud Alpha yentloko yokudlala, ukusuka kwi- $ 100, Amazon.com
25. I-DIY Cocktail Kit
Nasi esinye isipho esifanelekileyo kumkhwenyana onayo yonke into. Thenga kuye iseti isiraphu kunye neencindi zokwenza ukuxuba i-cocktails ezimnandi. Olu dityaniso lobukrelekrele lunokusetyenziselwa ukwenza ngaphezulu kwama-50 ahlukeneyo. Yongeza ibhotile ye utywala obuthandayo okanye uyinike njengesipho sedwa-kuxhomekeke kuwe.
Ukutya kweCocktails Ikhithi yebhotile eyi-8, $ 60, CheekyCocktails.com
26. Ibhotile yaManzi yokuziCoca
Ukuba izipho ezikrelekrele kumkhwenyana wakho zezinto ozilandelayo, sukujonga ngapha nangapha kwale bhotile yokuphamba enamandla. Isibane se-UV-C esakhelweyo se-LED sisebenza njengamanzi okucoca amanzi kunye nokucoca iibhotile kwenye, ukugcina zonke iisip njengokutsha njengokugqibela. Ukuyikhupha yonke into, ipesenti yazo zonke iintengiso ziya kwi-1% yePlanethi, engenzi nzuzo ezinikele ekukhuseleni okusingqongileyo.
LARQ Ibhotile enokuphinda isebenze, ukusuka kwi- $ 95, LiveLARQ.com
27. Isetmo yangaphakathi yokuSeta
Khupha elona xesha lilungileyo lobusuku ngaphandle kweenkwenkwezi ukuya kwigumbi lakhe lokuhlala. Iseti eyahlukileyo iqulethe yonke into aya kuyidinga ukuze enze ngempumelelo i-smores, kubandakanya neglasi ephathekayo, i-skewers yentsimbi engenasici kunye nomngxunya omncinci womlilo. Cinga ngesipho sakho esilukhuni ukuthenga-kumkhwenyana esilungisiweyo!
UPatrick Fitzpatrick Ngaphakathi kuyatshisa umgodi womlilo, $ 175, UncommonGoods.com
28. Ikhithi yedophu yesikhumba seLuxe
Ngena zonke kwizipho zeholide kumkhwenyana wakho kulo nyaka kunye nengxowa yethayile yangasese yesikhumba sase-Itali. Yinto eya kuhlala ixesha elide ayibambeleyo ngonaphakade.
Satchel kunye nephepha Ikhithi yedopp, $ 145, SatchelandPage.com
29. Igajethi yokugcina iBhiya yakhe ibanda
Esi sixhobo soyikekayo sinendawo eyahlukileyo yokugcina iziselo zishushu kwaye zibanda- zilungele ukonwabela ibhiya ehlaziyayo ekhaya kunye nekofu eofisini. Ngapha koko, ayizukulawula ubushushu besiselo sakhe kuphela, ikwitshaja yefowuni engenazingcingo. Thetha ngesipho esihle kumkhwenyana wakho!
Umfanekiso obukhali ukufudumeza / ukupholisa isiseko sesiselo ngokutshaja ngaphandle kwamacingo, $ 100, SharpImage.com
30. I-2-in-1 yokuLima iKhithi
Ukuthengela umkhwenyana ngesithupha esiluhlaza? Le khithi yegadi iza neqela lezixhobo eziluncedo, kubandakanya ifolokhwe, umlimi, ukhula kunye neetrowel ezimbini. Elona candelo lililo? Ikhithi ngokwayo isonga esitulweni ukuze isebenze ngokukhululekileyo (okanye uthathe nje ukuphumla okufanelekileyo). Kukho nebhegi ye-chic yokubamba kakuhle ukuyibeka kude.
Ixesha lePikniki Isihlalo segadi kunye nezixhobo zesixhobo, $ 76, Ukutya52.com
31. Ikhandlela Eliphefumlelweyo Ligalufa
Ikhandlela elimnandi nelinuka kamnandi liya kwenza 'ukwamkeleka kwisipho sosapho' kumkhwenyana wakho, ngakumbi ukuba usapho lwakho lukhulu kwigalufa. Yonke inentsingiselo ngakumbi ukuba uyammema ukuba adlale umdlalo nawe ngamanye amaxesha. Ikhandlela liza kukhetho lweziqholo ezibini eziphefumlelweyo zegalufa: IVelvet Moss kunye neCitrus okanye iSikhumba neSuede.
Imidlalo yeWick Ixesha leTe linekhandlela elimnandi, $ 30, WickSports.com
32. Ukuzilungisa okuNgenamsebenzi
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, nantsi enye indlela elula yokukhetha. Esi sipho sihlekisayo somkhwenyana sincamathele kwindebe yakhe ukukhusela iindevu zakhe ekubeni zimanzi! Ukuba unebhongo ngokukodwa ngeenwele zakhe zobuso (kwaye unoburharha), lo uya kumenza aqhekeze.
Idama leWhisker umgcini wamadevu owenziwe ngesandla, $ 20, TheGrommet.com
baneminyaka emingaphi abantu abaninzi batshata
ngubani u-maria sharapova ukuthandana
Igama lokutshintsha umissouri emva komtshato